Ahoana no hahazoana Adobe Premiere Elements maimaim-poana ara-dalàna - maimaim-poana Premiere Elements Download 2022 Version
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Maimaimpoana Adobe Premiere Elements
By Ann Young, Mathis Ravatomanga 2022-05-10, Malagasy Blog
Mifanaraka: Windows, Mac OS
PREMIERE ELEMENTS MAIMAIMPOANA
Angamba, rehefa maheno ny “Adobe Premiere Elemen maimaim-poana” ianao dia mieritreritra ireo loharano torrent. Fa ahoana kosa raha milaza aminao momba ny fomba iray ara-dalàna aho hampidinana ireo singa Premiere 2022 , rindrambaiko matihanina amin'ny fanovana horonantsary, ho MAIMAIMPOANA ary tsy misy fetran'ny fampiasa?
Tombontsoa azo avy amin'ny Premiere Element maimaim-poana
Karakarao amin'ny horonantsary marani-tsaina
Fanasokajiana horonan-tsary mety
Fanovana audio efa lasa lavitra
Stabilization no mifehy
4K lahatsary fanovana
Maharitra hafiriana ny kinova fitsapana Premiere Elements?
Barana tsy manam-paharoa Adobe Premiere Elemen dia misy ao anatin'ny 30 andro aorian'ny fandefasana voalohany. Aorian'ny famaranana azy dia mila mividy licence amin'ny $ 99 ianao.
JEREO NY FIKAMBANANA ADOBE PREMIERE
Ahoana no tsy itovizan'ny Adobe Elements Premiere sy ny Premiere Pro?
Premiere Elements dia safidy mety indrindra ho an'ny mpampiasa vao manomboka, satria misy fomba 3 (Haingam-pandeha, voatarika ary manam-pahaizana) ahafahana mahafehy ny fizotry ny fanaovana sarimihetsika avy amin'ny tena manomboka. Adobe Premiere Pro miaraka amin'ireo fitaovana avo lenta dia natokana ho an'ireo mpampiasa pro.
Tokony havaoziko ao amin'ny kinova 2022 ve ny singa premiere?
Mazava ho azy. Ny mpikarakara dia nikarakara ny fanavaozana ny ankamaroan'ny fitaovana, ao anatin'izany ny teknolojian'ny fahaizana artifisialy, ary koa nanolotra endrika mahaliana sasany, ohatra, Smart Trim ary ny fikarohana video haingana miaraka amin'ny Smart Tags.
UPDATE PREMIERE ELEMENTS 2022 MAIMAIMPOANA
Inona ireo fepetra takiana amin'ny rafitra kely indrindra hitantanana ireo singa Premiere 2022 ?
Afaka hijery kely dia kely rafitra takiana ao amin'ny pejy ofisialy Adobe.
Manohana ny HEIF sy HEVC ve ireo singa première 2022
Eny, azonao atao ny manafatra sy manova rakitra fisie HEIF sy rakitra video HEVC amin'ny Windows ary koa macOS.
Azoko atao ve ny mividy ny kinova farany misy vidiny mihena?
Eny, Adobe tolotra Premiere Singa 2022 tsy vaovao mpampiasa, fa koa noho ny efa misy olona, miaraka amin'ny fihenam-bidy ny $ 10.
Anisan'ny fianakavian'i Creative Cloud ve ny singa première 2022
No. Ny lahatsary tonian-dahatsoratra dia napetraka ho toy ny misaraka ho an'ny Windows fampiharana sy ny Mac OS.
Tsy fahatokisan-tena amin'ny fampiasana Pirated Adobe Elements Free Version
Rehefa tapitra ny kinova fitsapana na hampiakarin'ny Adobe ny vidin'ny rindrambaikoo indray dia lasa azo tanterahina kokoa ny fahafaha-mampiasa loharano torrent.
Na izany aza, ahoana no hanombatombanao tsara ny mety ho vokany? Ity ny lisitry ny olana mety hiteraka olana aminao na amin'ny PC-nao:
Mety tsy fantatrao, fa amin'ny alàlan'ny fampidinana rindrambaiko avy amin'ny loharano torrent dia mandika ny copyright an'ny tompona (developer / orinasa) ianao. Tsy hisy ny olana raha sendra nanao izany tsy nahy ianao indray mandeha, fa amin'ny fisintomana miverimberina dia voatery hampifandray anao amin'ny tamba-jotra ny mpamatsy Aterineto ary hitondra taratasy fiantsoana ny paositra any an-toerana.
Tsy hisy olona hanampy anao amin'ny olana ara-teknika
Ireo izay mampiasa kinova Adobe Elements Premiere tsy ara-dalàna dia tsy afaka manantena ny hahazo fanampiana avy amin'ny orinasa raha sendra misy olana amin'ny rindrambaiko. Afaka manamarina mora foana ireo mpandrindra raha mampiasa programa ofisialy ianao, satria tsy maintsy mifamatotra amin'ny kaontinao izany.
JEREO NY LICENSES ADOBE SY NY TERMS
Mametraha Antivirus tsara na mila miresaka amin'ny Master tsara ianao
Sehatra feno virus ny plateforme torrent. Ny olon-drehetra, na dia ilay hacker kamo indrindra aza dia nampakatra ilay virus tamin'io farafaharatsiny. Ny viriosy amin'ny solosaina dia mety tsy ny tsotra indrindra, amin'ny endrika dokambarotra hita eo amin'ny birao, fa mampidi-doza kokoa koa, izay ampandehanana rehefa mandeha ny fotoana, maka tahaka sy mandefa ny angon-drakitrao manokana, ao anatin'izany ny teny miafina avy amin'ny banky sy ny tambajotra sosialy, ho an'ilay manafika.
Safidy premiere 5 maimaim-poana
Hahafantatra fa ny ankamaroan'ny mpampiasa vao manomboka dia tsy mahazaka rindrambaiko matihanina amin'ny fikarakarana, fanovana ary famokarana horonantsary mandeha ho azy, dia nanomana safidy maimaim-poana 5 maimaim-poana ary tsy dia mahomby amin'ny Adobe Elements Premiere aho.
Mampiasà DAVINCI RESOLVE FREE
UI azo takarina amin'ny fiasa fototra
Safidy mety amin'ny famokarana feo, fanoratana loko ary famoronana
Ny kinova maimaim-poana dia tsy manome fanampiana 4K
Davinci Resolve 17 dia maimaimpoana tanteraka, saingy tsy mahomby, na dia amin'ny fanatanterahana fanodikodinana ifotony aza.
DaVinci Resolve dia manana asa an-jatony ho an'ireo manampahaizana manokana amin'ny famoahana horonantsary, ao anatin'izany ny fitaovana Fairlight, ahafahanao mirakitra, manova, mampifangaro ary manatsara ny feo ao anatin'ny habaka feo telo refy ary hatramin'ny fantsona 1000.
Ity lahatsary ity dia nanova rindrambaiko mirehareha maro koa izay ahitana ny sivana mandeha ho azy face fankasitrahana sy ny fanaraha-maso haingana feo mitovy tantana hoditra, miramirana maso, miova loko molotra, sns
Mianara bebe kokoa momba ny rindrambaiko fanovana horonantsary tsara indrindra ho an'ny Windows.
Mampiasà MAIMAIMPOANA KDENLIVE
Mamorona backup avy hatrany
Vokatry ny feo maro
Manohana HD manontolo
Fampiasana tsy ampy
Tsy mifanaraka amin'ny Windows
Kdenlive no safidy tsara indrindra ho an'ireo mpampiasa Linux ary misy ihany koa ho an'ny Mac OS. Ny tonian-dahatsary dia manohana ny karazana endrika rehetra, ao anatin'izany ny Libav na FFmpeg, AVI, QuckTime, amin'ny famaha Full HD.
Misy fampiasa fitaovana manaitra mba hamoronana, hamindrana, hanangonany ary hitantanana clip. Ankoatr'izay, azo atao ny manampy ny vokany sy ny fanazavana hafa, manamboatra azy ireo ary mamorona tetezamita. Na izany aza, tsy ity no fiasa mahavariana indrindra amin'ny safidy maimaim-poana an'ny Adobe Premiere Elements. Kdenlive dia manohana ny LUTs loko, izay mahatonga azy io hiasa bebe kokoa ary, miaraka amin'izay koa, mora ampiasaina ho an'ireo vao manomboka.
Takelaka tsy voafetra
Tsotra ny mahafehy
Misedra rehefa manampy effets
OpenShot dia mety amin'ny YouTubers miaraka amin'ny teti-bola voafetra. Tsy toy ny ankamaroan'ny safidy Adobe Premiere Element maimaim-poana, ny OpenShot dia manohana ny fiasa miaraka amina sosona tsy manam-petra, izay ahafahanao manao fanodikodinana bebe kokoa amin'ny horonan-tsary. Ohatra, azonao atao ny mametraka ny làlana audio eo akaikin'ny tsipika video amin'ny sosona mitovy na clip audio eo ambonin'ny clip video.
Ho fanampin'ny asa iraisana, ny OpenShot dia manamora ny famoronana sarimiaina telo-habe, toy ny lohateny an-tsary, soratra manidina, lanezy ary ravin-taratasy misy solomaso.
Mampiasà MAZAVA MAIMAIMPOANA
Nihatsara VFX с Boris FX
Ao amin'ny kinova Premium ihany ny fanohanan'ny 4K
Tsy misy ny fiteny sasany
Lightworks dia mpamoaka horonantsary matanjaka ary safidy tsara amin'ny Adobe Elements miaraka amin'ny fitaovana haingana sy malefaka. Noho ny multitasking, mamela anao hanohy manitsy ny programa raha toa ka manafatra andian-drakitra ao ambadika izy, maka sary an-tsaina ny FX antoko fahatelo sarotra, na manondrana rakitra maromaro amin'ny endrika hafa.
Anisan'ireo fitaovana, azonao atao ny mahita ny fanitsiana loko efa mandroso, ny vokany haingana ary ny fakana horonantsary. Misy ihany koa ny fitaovana nentim-paharazana mba hanafarana, hamokarana, fanenomana feo malefaka ary koa hanampiana fiovana mahasarika.
zahao ny Famerenana Lightworks alohan'ny hisintomana ilay programa.
Mampiasà AVIDEMUX MAIMAIMPOANA
Lahatsary fanalana volo
Tsy misy fanohanana 4K
Tsy azo ampiakarina amin'ny LUTs
Avidemux dia analogy Adobe Premiere Elements tsotsotra sy maimaimpoana ho an'ny vao manomboka. Ny tonian-dahatsary dia manana fitaovana fototra ary afaka manatanteraka asa mahazatra rehetra, toy ny cropping, encoding ary ny sivana, izay misy ny fanovana ny habe sy ny hamafin'ilay horonan-tsary, ny fampidirana dikanteny sy ny mombamomba ny loko, ny fametahana sy ny fampitomboana na ny fihenan'ny haavon'ny feo amin'ny ankapobeny.
manohana ny endrika horonan-tsary maro ny rindrambaiko, ao anatin'izany ny MPEG, DVD, AVI ary MP4 malaza indrindra. Na izany aza, tsy afaka hiasa amin'ny vahaolana avo lenta ianao, 4K, HD / HD manontolo ihany.
Freebies Premiere Elements
Sintomy ireo takelaka hijerena ireo mba hanatsorana ny fizotry ny fanovana horonantsary amin'ny Adobe E Element Premiere.
Tombontsoa Premiere Element
Sintomy Premiere Elements 2022 Maimaimpoana
Adobe Illustrator Ho an'ny Mac Sintomy
Adobe XD Maimaim-Poana
Adobe Photoshop Element 14 Download
Adobe Photoshop Download Amin'ny Windows 7